မောင်စွမ်းရည် – DRONES! | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်စွမ်းရည် – DRONES!
(မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၅
တရုန်းရုန်းနဲ့ ၊ DRONES တွေဟာ
သူ့လဲ ကိုယ်မသိ၊ ကိုယ့်လဲ သူမသိ
လက်ထဲက ရီမုတ်(Remote ) နဲ့
မသာ သွားလေရော– တဲ့။
စားစရာ၊ ဝါးစရာ၊ ပလာတာဘာညာတွေရော
ဖား၊ ခါ၊ စာ – အဆာပလာနဲ့ ၊ပါပလာတွေရော
ကစားစရာ၊ ညားစရာ၊ ဝါစာကမာတွေနဲ့
မနားသာ နားသာ ၊ မယားကညာဆွေလဲ
နွေအခါမှာ၊ လေလာလာ- မလာလာ၊
ရေ ဆာဆာ ၊မဆာဆာ၊
တေတျာ အဟင့်တွေနဲ့ ပလ္လင့်ခြေအရင်းမှာ
တပေလျဉ်းလျဉ်း ၊ နှစ်ဗွေပျင်းတိုင်း
ဟားသင့်မှ ဟား။ ။
ကမ်လူဝေး ● သေနတ်သမား